I-Sunwings 1bdr apartment - Union Island - I-Airbnb
I-Sunwings 1bdr apartment - Union Island
I-92% yeendwendwe zakutshanje inike uMarius iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Iyunithi ibekwe kumgangatho wokuqala wesakhiwo esineeflethi ibe ikufutshane nolwandle.
* igumbi lokuhlala *igumbi lokulala *igumbi
Iflethi yakho ikumanyathelo ambalwa ukusuka kwiivenkile zokutya, imifuno, ukuthenga, iibhari kunye neevenkile zokutyela. Indawo yokupaka esimahla yabucala iyafumaneka kwisayithi.
Iflethi yindawo yokuhlala eyi-400 square ft kumgangatho osezantsi, isilingi ephakamileyo ye-10 ft, amanyathelo ayi-20 okuya elwandle apho abantu abatyibilika ngephenyane abanokuqala khona.
Le ndlu ikwindawo ekhuselekileyo enabamelwane abanobubele.
Ndifumaneka imini nobusuku kuWhatsApp ukuze ndiphendule yonke imibuzo yeendwendwe zam. Ndikwahlala kule ndlu.